Units Plus Shanduro yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Units Plus Shanduro yemahara kwenguva yakati rebei
Chokwadi ndechekuti vhiki rino takave nezvishoma, kwete kutaura, hapana yemahara app yaive yakafanira, asi nerufaro nhasi tawana imwe yekuti kune avo vari kuenda kunze kwenyika panguva ino yezororo inogona kuve yakanaka. Units Plus Converter, chishandiso chakanakira aya mazororo kubvira inotibvumidza kushandura chero kuyerwa, mari, tembiricha, vhoriyamu, kureba… Izvo zvatisingazivi. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose muApp Store ye2,99 euros asi kwenguva yakati wandei tinogona kuikanda zvachose mahara.
Iko kushanda kweichi chishandiso kuri nyore kwazvo, sezvo kusiyana nemamwe maapplication ayo anotibvumidzawo isu kuita shanduko, nekukurumidza patinovhura iko kunyorera isu tinowana dzese sarudzo dziripo pasina kutenderera mumamenyu akasiyana. Muchikamu chekuruboshwe tichafanirwa kuseta chinhu chatinoda kushandura uye kurudyi tichafanira kutsvedza sarudzo dziripo kusvikira tawana iyo inokodzera zvido zvedu.
Units Plus Shanduri inotibvumidza kushandura kusvika pamatanho gumi nemaviri akasiyana Pakati pedu patinowana: Nzvimbo, Mari, Dhata (byte, kilobyte, megabyte…), Fuel - Mileage, Kureba, Simba, Kumanikidza, Kumhanyisa, Kupisa, Nguva, Vhoriyamu uye Kurema. Iwo mwero wekuchinjana unovandudzwa ese maminetsi gumi neshanu kana iko kushanda kuri kushanda kana pese patinoimhanyisa. Units Plus Shanduro inotibvumidza kushandura mari pakati pezana nemakumi mashanu neshanu emari dzinoshandiswa pasi rese.
Ichi chishandiso, chiri chekubhadhara chikumbiro, kunze kwekunge chiri kutengeswa sezvazviri, haina chero mhando ye-in-app kutenga. Uye zvakare, haina kutipa kushambadzira sekunge isu tinowana mune mazhinji emahara mafomu erudzi urwu, saka kana iwe uchiwanzoshandisa yemahara ine kushambadzira, ichi chishandiso chinodzivirira kuve nekutambura iwo anofara ekushambadzira mapepa pazasi pechikumbiro.
Units Plus Shanduri5,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Units Plus Shanduro yemahara kwenguva yakati rebei
Apple Mepu ichapa ruzivo rwakadzama rwekupaka nekutenda kuParkopedia